म कसरी बिलबोर्ड डिजाइन गर्ने? - Print Peppermint
म कसरी बिलबोर्ड डिजाइन गर्ने?
नोभेम्बर 23, 2018 | विज्ञापन, ब्यानर र साइनेज
बिलबोर्ड डिजाईन गर्दै जुन बिक्री हुन्छ - अल्टिमेट गाइड
एक पक्ष जसले बिलबोर्डलाई आवश्यक मार्केटिंग उपकरण बनाउँदछ एक सडक छेउको सर्वव्यापी हो। व्यस्त यातायात स from्केत देखि लिएर ग्रामीण इलाकाका हरियो पास्टरहरू सम्म यी विशाल संरचनाहरू जताततै जमिनमा रोपिएका हुन्छन्। तिनीहरूको मजा लिन्छ - लाखौं। श्रोताहरू बटुल्ने सम्भावना उनीहरूसँग छ - विशाल।
तर हेडिंग गर्ने बिलबोर्ड डिजाइन बनाउने कलालाई विस्तृत रूपमा ध्यान दिन र एक विधिगत रणनीति चाहिन्छ।
यदि तपाईं बिलबोर्ड डिजाइनिंगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, यहाँ कसरी तपाईं आफ्नो विज्ञापन बजेट राम्रो उपयोगमा राख्न सक्नुहुन्छ।
प्रभावी बिलबोर्ड डिजाईन युक्तिहरू
१. यसलाई स्पष्ट, संक्षिप्त र-देखि-पोइन्ट राख्नुहोस्
तिनीहरू भित्र छिराइएको स्पिडि cars कारहरू र बटुल्नेहरूसँग तपाईंको बिलबोर्ड डिजाइन हेर्न3देखि seconds सेकेन्डको मात्र विन्डो हुन्छ। यस सीमित समयसीमामा, तपाईंले तिनीहरूको ब्रान्डको सन्देश तिनीहरूको दिमागमा छाप्नु पर्छ।
यो पूरा गर्न तपाईको बिलबोर्डको पाठलाई गम्भीर रूपमा सीमित राख्नुहोस् - words शब्द एकदम धेरै नै। र यी words शब्दहरू गणना गर्नुहोस्। असंबद्ध र भ्रामक जानकारी एकीकृत नगर्नुहोस्। To-the-point र संक्षिप्त गर्नुहोस्। पूरा वाक्यहरू हिज्जे नगर्नुहोस्। Jargon र उद्योग भाषा एक ठूलो संख्या हो। "यो" "द" र अन्य शब्दहरू वाक्यलाई स्वस्थ महसुस गर्न सल्लाह दिँदैन। खण्डित वाक्यहरूमा टाँसिनुहोस्।
तपाईंको दर्शकहरूलाई फोन नम्बर वा वेबसाइट ठेगाना दिनुहोस्। लोगो वा एक स्थान घुसाउनुहोस् तपाईंको ब्रान्डको अगाडिको ढोकामा यात्रुहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न। केवल निश्चित गर्नुहोस् कि सबै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ छ र अनावश्यक सबै त्यागिएको छ।
त्रुटिको लागि मार्जिन न्यूनतम छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ डिजाइनलाई अधिक वा समतुल्य गर्नुहुन्न।
२. एक सुस्पष्ट र प्रमुख फन्ट छनौट गर्नुहोस्
तपाईको बिलबोर्ड गर्व राजाको जस्तै ठाडो हुनु आवश्यक छ। यदि यो प्रख्यात वा नाजायज नभएमा, थोरै भए पनि, यसले ड्राइभरको दिमागको आँखा हराउने ठूलो सम्भावना छ।
पाठ ओभरसाईज, सफा, सुवाच्य, र बोल्ड राख्नुहोस् यो ठिकसँग पढ्न योग्य छ। सम्झनु; फन्टको आकार जति ठूलो छ, पाठकलाई बुझ्नको लागि यो सजिलो छ।
जीवन बिलबोर्ड डिजाइन भन्दा ठूलो डिजाइन गर्न संकोच नगर्नुहोस्। यसले थोरै अतिरिक्त खर्च गर्न सक्दछ, तर यो सबैको अन्तमा लाभांश भुक्तान गर्न गइरहेको छ।
B. बोल्ड र भाइब्रेन्ट रick्गहरू छान्नुहोस्
एक सफल बिलबोर्ड डिजाइन प्रख्यातताको एक प्रतीक हो।
र बोल्ड रंग र छविहरूसँग चम्किलो भन्दा कुनै न कुनै तरिकामा हीरालाई प्रख्याततामा ल्याउने राम्रो तरिका। तिनीहरू कुनै पनि डिजाइन एक आँखा आकर्षक सौंदर्य बनाउन उत्तम सामग्री हुन्।
Power. शक्तिशाली विरोधाभासहरूको साथ जानुहोस्
सस्तो विरोधाभासहरूबाट स्पष्ट स्टियर गर्नुहोस् जसले बिलबोर्डलाई स्वादिष्ट र गउचेको भन्दा चित्रमय र मंत्रमुग्ध बनाउँछ। रंगीन र उपयुक्त विरोधाभासहरूले तपाईंको सन्देशलाई पूरक गर्दछ र यसलाई थप दृश्यता दिन्छ।
A. एकल उच्च गुणवत्ता र सान्दर्भिक छवि चयन गर्नुहोस्
छविहरूको छनौट अर्को संवेदनशील कुरा हो।
पृष्ठभूमिले तपाईंको छविहरूलाई जोड दिनुहोस्, तिनीहरूलाई डाउनप्ले गर्नुहुन्न। निश्चित गर्नुहोस् कि यो सरल छ र केवल ध्यान तपाईंको मुख्य दृश्य आकर्षणहरूतर्फ फर्काउन कार्य गर्दछ।
एक धेरै फोटोहरु को उपयोग बाट टाढा रहनुहोस्। एउटा ठूलो उच्च-गुणवत्ता छवि काम पूरा गर्नका लागि पर्याप्त छ। यसले मुठीभर भारी र भीड तस्बिरहरूको हिपिंग गडबडी भन्दा धेरै अधिक प्रभाव पार्छ।
तपाईंको बिलबोर्डको वरपरको वातावरणले सर्वोपरि महत्त्व राख्छ। तपाईको बिलबोर्ड राख्नु पर्ने क्षेत्र तपाईले अध्ययन गर्नु पर्छ।
Perf. उत्तम ब्यालेन्स प्रहार गर्नुहोस्
बिलबोर्डहरू ड्राइभरहरू, मोटर चालकहरू र अन्य मोबाइल दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न डिजाइन गरिएको हो। विडंबना, यो विज्ञापनदाता को लागी एक रहस्यमय अवस्था सिर्जना गर्दछ। ऊ मान्छेले उसको विज्ञापन ध्यान दिएर हेर्न चाहान्छ, तर डिग्रीले भनेन कि यसले दुर्घटना हुन्छ।
यसै कारणले कि बिलबोर्ड डिजाइनमा सटीक सन्तुलन हड्ताल धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो सुनिश्चित गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो कुनै पनि प्रकारको कठोर आलोचनाको साथ मिलेको छैन।
Brand. ब्रान्ड मान्यतामा फोकस गर्नुहोस्
विज्ञापनदाताहरूले बिलबोर्ड विज्ञापनको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ।
बिलबोर्डहरू सिधा ग्राहकहरू ल्याउनको लागि होइन।
यो धेरै सम्भावना छैन कि एक दर्शकले स dial्ख्या डायल गर्नेछ वा सडकको बिलबोर्डमा प्लास्टर गरिएको वेबसाइट भ्रमण गर्दछ। .१% हुन सक्छ, तर बाँकीले कुल उदासीनता देखाउँदछ। उनीहरूले त्यस्ता जानकारीलाई उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्न अयोग्य ठान्छन्।
बिलबोर्ड विज्ञापनको प्राथमिक उद्देश्य ब्रान्ड निर्माण हो, कल-टु-एक्शन होइन। बिलबोर्डहरूमा केवल भारी लिफ्टि do गर्न मार्केटिंग कद छैन। यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ।
मेरो सल्लाह: फोन नम्बर र सोशल मिडिया लिंकको साथ तपाईंको डिजाइनलाई भीडभाड गर्न ईन्च हटाउनुहोस् र के महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा केन्द्रित गर्नुहोस्।
Over. ओभर स्मार्टनेसबाट टाढा रहनुहोस्
अपमानजनक, साहसी, कल्पनाशील, र जासूस बन्नुहोस्। तर सबै भन्दा निश्चित गर्नुहोस् कि मानिसहरूले तपाईंलाई बुझ्दछन्।
एउटा सुस्त र ब्लान्ड बिलबोर्ड खराब रूपमा असफल हुनेछ। यसको बारेमा कुनै प्रश्न छैन। मानिस सजिलै चाहना राख्छन्।
जे होस्, सम्झनुहोस् कि ओभर स्मार्टनेसले तपाईंलाई मूल्य तिर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो पाठकको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्छ, उसलाई उसको टाउको कोरेर नत्र।
व्यक्तिहरू सीधा प्रतिभाको लागि सकरहरू हुन् जुन उनीहरूले बुझ्न सक्दछन्, बुझ्न नमिल्ने आइन्स्टाइन होईन।
जटिल र जटिल डिजाइनहरू र सन्देशहरू केवल पहेली र गोलमाल गर्न प्रयोग गर्दछ। र बिलबोर्डहरूको मामलामा, जहाँ सन्देश प्राप्त गर्न धेरै रोकिने समयावधि हुन्छ, त्यहाँ चीजहरू मूल तर सरल र सीधा एकै समयमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
Bill। बिलबोर्डहरूको सेनामा लगानी गर्नुहोस्
अधिकांश विज्ञापन कुमारीहरू सचेत छैनन् कि बिलबोर्डहरूले ग्रस रेटिंग पोइन्टहरू वा GRP पाउँछन्। स्थान, दृश्यता, ट्राफिक र आकार जस्ता विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दै, बिलबोर्डहरूलाई एक प्रदर्शन स्कोर (१-११००) तोकिन्छ।
यदि एक बिलबोर्डले showing० को देखाइएको स्कोर प्राप्त गर्दछ, यसको मतलब यो छ कि वरिपरि जनसंख्याको कम्तिमा percent० प्रतिशतले दिनमा कमसेकम एक पटक यसको साथ हिसाब आदान प्रदान गर्न बाध्य छ।
त्यसो भए, यदि तपाईंसँग क्षेत्रमा एकल बिलबोर्ड छ भने, तपाईंको उद्देश्य दर्शकहरूमा पुग्ने सम्भावनाहरू तपाईंसँग or वा even भए पनि भन्दा कम कम हुन्छ।
तपाईको लक्ष्य पुग्नको लागि पुग्छ कि व्यापक रूपमा १०० GRP खोजिएको थियो, तर यसले तपाईलाई खर्च गर्न सक्दछ
सम्बन्धित: तपाईंको बिलबोर्ड डिजाइनमा विचार गर्नुपर्ने Es आवश्यक कुराहरू
१०. मूल र साहसी हुनुहोस्
तपाईको बिलबोर्डको ज्यामिति संग फिडल। पक्का, फ्लैट डिजाइन परम्परा हो। तर तपाईं जहिले पनि परम्परा तोड्न सक्नुहुन्छ। यो वास्तव मा तपाइँको लाभ गर्न को लागी काम गर्न सक्छ।
तपाईं थ्रीडी डिजाइनको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको दर्शकलाई समावेश गर्नका लागि अन्तर्क्रियात्मक जान सक्नुहुन्छ र अपलिफ्टिंग र रोचक एनिमेशनहरू एकीकृत पनि हुन सक्नुहुनेछ। उस्तै पुरानो डिजाइन प्याराडाइमहरूमा रहनको लागि कुनै कडा र द्रुत नियम छैन। बक्स बाहिर रचनात्मकता र सोचले तपाईंलाई साधारण बथानमा बढाउछ।
तपाइँको सृजनात्मक आँखा प्रदर्शन को अवसर बर्बाद गर्न नदिनुहोस्। तपाइँ एक कलाकार हुनुहुन्छ, प्रशिक्षित बाँदर होइन। त्यो याद गर्नुहोस्।
११. बुद्धिमत्तापूर्वक लोगो आकार छनौट गर्नुहोस्
प्रत्येक विज्ञापनदाता नियम द्वारा कसम खाने छन्: लोगोको आकार ठूलो राख्नुहोस्।
यसको पछाडि तर्क एकदम तार्किक छ। मेरो मतलब, ठूलो लोगो, अधिक ध्यान यो garners, सही? तर, यो सधैं एक ठूलो लोगो को साथ जानका लागि राम्रो छैन। किन?
एक ठूलो आकारको लोगोले ब्रान्डको मुख्य सन्देशबाट लाइमलाइट चोर्न सक्छ, जुन वास्तवमा सम्भावित ग्राहकहरूलाई रूपान्तरण गर्न गइरहेको छ। त्यसोभए, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसको र पाठको आकारको बिच एक पूर्ण सन्तुलन प्रहार गर्नुहुन्छ।
१२. हातको लम्बाई परिक्षण गर्नुहोस्
ठीक छ, तपाईंले आफ्नो पछाडि भाँच्नुभयो, भारी लिफ्टिंग गर्नुभयो, आधी रातको तेल जलाउनुभयो, र नतीजा सुन्दर बिलबोर्ड डिजाइन हो। तर पर्खनुहोस्, तपाईंले अझै पूर्ण गर्नु भएको छैन।
आफैलाई सोध्नुहोस्, के मानिसहरूले तपाईंको बिलबोर्ड पछाडि तर्क बुझ्नेछन्? के यो देखीएको र सुनेको र सबै भन्दा धेरै, के यसले छाप दिन्छ? म कसरी पक्का गर्न सक्छु?
यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन, तपाईंको बिलबोर्डको लघु संस्करण प्रिन्ट गर्नुहोस् - व्यवसाय कार्डको आकार - र यसलाई आफ्नो पाखुरामा राख्नुहोस्। के योसँग सबै चीजहरू छन् जुन यो तपाईंको कम्प्युटर स्क्रिनमा प्रदर्शित भएको थियो? यदि होईन भने, यो समय प्रक्रिया गर्ने र यसलाई पप गर्ने समय हो।
आश्चर्यजनक र प्रभावकारी बिलबोर्ड विज्ञापन जुन दर्शकहरूलाई विसर्जित गर्दछ
अब जब हामी बिलबोर्ड डिजाईनिंगका फाउन्डेन्टलहरूसँग गर्छौं, यो समय केहि रोमाञ्चकारी, सोच्ने-उत्तेजक र असाधारण अनौंठा बिलबोर्ड विचारहरूमा प्रकाश पार्ने समय हो। हामी यो तपाईंलाई भर्खर एउटा विचार दिनका लागि गर्दैछौं कसरी पेशेवर डिजाईनरहरूले माथिका नियमहरू बेवाइल्डर र स्तब्ध दर्शकहरूलाई कसरी प्रयोग गर्छन्।
१. फायरफ्लाई बिलबोर्ड विज्ञापन
स्रोत: मोहम्मद सफीउद्दीन
हवाइजहाजको छायाले यस्तो देखिन्छ कि यो आकाशबाट कास्ट गरिएको छ। यो तपाईंको ब्रान्डको सन्देश लाई बढाउनको लागि तपाईंको वरपरको कुराकानीको उत्कृष्ट उदाहरण हो।
२ जंजीर फ्लेक्स
थप कडा फ्लेक्सको दाबीलाई अझ सुदृढ पार्नको लागि हेर्नुहोस् साघुँरोले केटाकेटीको स्विing्गमा चेन निलम्बन गर्दछ। यो अनौंठो डिजाइन दुबै हास्यपूर्ण र चिन्ताजनक हो र तपाईको शारीरिक परिवेशलाई उत्तम बनाउने अर्को राम्रो उदाहरण हो।
पुरुषको कपाल को दुई पक्ष
स्रोत: ड्यासिंग हब
दर्शकहरूलाई ड्राइभ गर्न र उनीहरूलाई छिटो कार्य गर्न बाध्य गर्न यो डिजाइनले शक्ति विरुद्ध कमजोरी खडा गर्दछ। यो केटि मानिसहरुको भावनाहरु संग खेल्छ तर एकै समयमा उनीहरुलाई तिनीहरुको सबै दु: ख समाधान गर्ने माध्यम प्रदान गर्दछ।
मलाई यो बिलबोर्ड डिजाइन मन पर्छ किनकि यसको अनौंठो ढाँचाको कारण। ब्रान्ड सन्देशको साथ फ्ल्याप (हेयर क्लबको साथ यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्) जस्तो देखिन्छ कि यो पोप आउट भइरहेको छ। यो केवल यत्तिको दृश्य प्रमुख छ।
The. रेजर शार्प ब्लेड
माथिको डिजाइन एक नियम हो कि त्यहाँ कुनै सीमा छैन जब यो बिलबोर्ड डिजाइनिंगको कुरा आउँछ। तपाईं तपाईंको बिलबोर्डको ज्यामितिको साथ टिमांक गर्न सक्नुहुनेछ असीमित रूपमा यसलाई बाहिर खडा गर्न र तपाईंको ब्रान्ड दर्शनलाई पूरक बनाउन। रचनात्मकताको राजाहरू तपाईंको हातमा छन्।
The. पपिंग स्टेक
स्रोत: CSS डिजाइन पुरस्कार
हो, बिलबोर्डका साथ पछाडि ठूलो फोर्क प al्क्तिबद्ध आकर्षण हो। तर, आकर्षक टाइपोग्राफी, स्टेकको बोल्ड फैलाउने छवि र र p्ग प्यालेटको छनौटलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यी सबै कारकहरू सँगै मिलेर काम गर्दछन् यस डिजाइनलाई यसको विशेषता प्रख्यातता दिन।
बिलबोर्ड डिजाईनिंग एक सूक्ष्म कला हो। तपाईंले प्रत्येक विवरणहरू पूरा गर्नै पर्छ, प्रत्येक आधारभूत नियमको पालना गर्नुहोस्, र अझै परम्परा तोड्नुहोस् र तपाईंको लगानीको लायकको उत्कृष्ट कृति सिर्जना गर्न बक्स बाहिर सोच्नुहोस्। सपना ठुलो र यहाँ र त्यहाँ ठोकरको एक जोडी संग, तपाईं अन्ततः आफ्नो लक्ष्यहरु पुग्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ के गर्न निश्चित हुनुहुन्न वा बिलबोर्ड डिजाईन गर्न कुनै सहयोग चाहानुहुन्छ जसले तपाईंलाई श्रोताको सन्देश सुनाउँन मद्दत गर्दछ भने, हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हाम्रो बिलबोर्ड डिजाइन सेवाहरू सँधै तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
Bill बिलबोर्ड डिजाईन गर्दा मैले के विचार गर्नुपर्छ?
ब्रान्डि is भनेको के हो? →